Madaxweyne Geelle oo Minnesota kula kulmay jaaliyadaha Jabuuti iyo Somalia – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
8th August 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Jaaliyadaha Soomaaliyeed iyo Jabuuti ee ku dhaqan Magalada Minnepolis ee dalka Mareykanka ayaa madaxwaynaha Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle iyo wafdi uu hoggaaminayo kusoo dhaweeyey halkaas.
Xaflad lagu soo dhaweynayay madaxweynaha wadanka Jabuuti Cismaaciil Cumar Geelle ayaa xalay ka dhacday Hotelka Xataad ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, waxaana ka soo qeyb galay kumanaan ka mid ah labada jaaliyadood ee Soomaaliya iyo Jabuuti.
Madaxweyne Gelle ayaa si qiiro leh ula hadlay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykanka wuxuuna kula dardaarmay inay muujiyaan wada jir iyo midnimo.
“Qurbo-joogta waa la xantaa, hase ahaatee maadaama ay maanta Soomaaliya ugu nasiib wanaagsan tahay waxaa la idinka rabaa inaad midnimo yeelataan, waayo qaran iyo qabiil meel ma wada galaan” ayuu yiri Madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle.
“Shalay waxaan la sheekeysanayay madaxweynaha South Sudan, wuxuuna ii sheegay inay yihiin 65 qolo oo mid kasta afkiisa iyo diintiisa leeyahay taasina waxay kuu muujineysaa in Illaahey uu jecelyahay dadka Soomaaliyeed, waayo wuxuu ka dhigay dad hal qabiil ah oo hal af ku hadla” ayuu sii raaciyay Madaxweynuhu.
Wuxuu sheegay mudane Cismaaciil Cumar Gelle in dowladda iyo dadka Jabuuti aysan marnaba joojin doonin taageera ay la garab istaagan yihiin shacabka Soomaaliyeed. “Na weydiista wixii aad u baahan tihiin” ayuu si qiiro leh u yiri madaxweynuhu.
“Ciidankeenna waan kordhineynaa ilaa inta Alshabaab laga sifeynayo wadanka” ayuu Gelle ku tillaabsaday.
Mar uu la hadlayay Jaaliyadda Jabuuti ayuu yiri Madaxweyne Geelle “Taageeradii dadka Soomaaliyeed ay na siiyeen lama hilmaami karo, sidaa daraadeed la garab gala dadaalka ay ku jiraan dadka Soomaaliyeed”
C/raxmaan Ciise Kaahin oo ka mid ah Jaaliyadda Jabuuti ayaa Hiiraan Online u sheegay in sababta uu madaxweyne Gelle uu Minneapolis u yimid ay tahay casuumaad uu ka helay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykanka, si ay uga mahadcelinayaan taageerada uu la garab istaagan yahay dalka Soomaaliya.
Xafladdan oo si heer sare ah loo soo agaasimay waxaa isna ka hadlay guddoomiyaha FAGAARAHA Sadiq Warfaa oo ka codsaday madaxweynaha Jabuuti inuu laba jibbaaro dadaalkiisa xal u helista mushkiladda geeska Africa.
Ugu dambeyn, Jaaliyadda Soomaaliyeed, gaar ahaan xubno kasoo jeeda Gobolka Hiiraan ayaa madaxweyne Geelle waxay guddoonsiiyeen abaal marin ay ugu magaca dareen “Hiil-Walaal” oo ah magaca ay wataan ciidamada Jabuuti ka jooga gobolka Hiiraan ee Soomaaliya.